अमेरिकामा पहिलेभन्दा कोरोना संक्रमण भ’यावह – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रियअमेरिकामा पहिलेभन्दा कोरोना संक्रमण भ’यावह
अमेरिकामा पहिलेभन्दा कोरोना संक्रमण भ’यावह
वासिङटन डिसी : अमेरिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको ह्वा’इट हाउस कोरोना टस्क फोर्सकी संयोजक डा. डेबोरा बिक्र्सले बताएकी छिन्। सी’एनएनसँग कुरा गर्दै उनले यो चरणमा झनै संक्रमण फै’लिने र भ’यावह हुने बताएकी छिन्। ‘मार्च र अप्रिलमा भन्दा अहिले फरक स्थिति देखिन्छ’, डा. बिक्र्सले भनिन्, ‘यो असाधारण रूपमा फै’लिएको छ। ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा उस्तै अवस्था छ।’ उनले अमेरिकामा बसोबास गर्ने सबैले सि’फारिस गरिएका स्वास्थ्य सा’वधानीहरू पालना गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
सार्वजनिक स्थलहरूमा नि’स्कदा अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न तथा सामाजिक दूरी कायम गर्ने उनले सु’झाएकी हुन्। ‘यदि तपाईं संयुक्त परिवारमा हुनुहुन्छ र तपाईंको ग्रामीण क्षेत्रमा कोरोना फै’लिएको छ भने घरमै ब’स्दा पनि आपूmलाई कोरोना पोजिटिभ भएको ठा’नी मास्क अनिवार्य रूपमा लाउनुहोस्’, उनले भनिन्। युएस से’न्टर्स फर डि’जिज कन्ट्रोल एन्ड प्रि’भेन्सनमा प्रकाशित एक नयाँ प्र’क्षेपित अनुमानअनुसार यही अगस्ट २२ सम्ममा अमेरिकामा कोरोनाबाट १ लाख ७३ हजार भन्दा ब’ढीको ज्यान जानेछ। त्यस्तै सरकारले कोरोना वि’रुद्ध नयाँ प्र’भावकारी रणनीति नल्याए यस वर्षको अ’न्त्यसम्ममा मृतक संख्या दो’ब्बर हुने डा. स्कट गोटलिएबले चे’तावनी दिएका छन्।
डा. बिक्र्सले भने कुनै प्र’क्षेपित मृ’तक संख्या भने बताइनन्। तर यो संख्या दक्षिणी र पश्चिमी राज्यहरूमा लागू गरिने स्वास्थ्य र’णनीतिमा भर पर्ने बताइन्। अहिले ती क्षेत्रका राज्यहरू कोरोनाको ‘ह’ट स्प’ट’ बनेका छन्। सबभन्दा बढी आ’क्रान्त बनेको अमेरिकामा हालसम्म ४८ लाख १४ हजार बराबर संक्रमित भइसकेका छन्। जसमध्ये २३ लाख ८० हजार बढी नि’को भएका छन् भने १ लाख ५८ हजार ३६५ ले ज्यान गु’माइसकेका छन्। एजेन्सी